ပြည့်ဖြိုး (နည်းပညာမျှဝေခြင်း): December 2011
ကျွန်တော် Post တွေမတင်နိုင်သေးလို့ တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ။
ကျွန်တော် အခုတလော အလုပ်လေးတွေနည်းနည်းများနေလို့ဗျာ။ ပြီးတော့ အလုပ်မှာReport တစ်စောင်လောက်တင်ချင်တာနဲ့ဘဲ Post တင်တာကို ခဏလေးရပ်ထားမယ်ဗျာ။ နှစ်လ ၀န်းကျင်လောက်တော့ကြာမယ်နဲ့တူတယ်ဗျာ။ အဲဒါကြောင့် Post အသစ်တွေမတင်ဖြစ်လို့ ညီကိုမောင်နှမတွေကျွန်တော့် Site လေးကို လာမလည်ကြမှာစိုးတယ်ဗျာ။
အဲဒါကြောင့် ဒီ Post လေးနဲ့ဘဲ Post အသစ်တွေကိုစောင့် ဖတ်ကြတဲ့ ညီကိုမောင်နှမတွေကိုတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Post တွေက တင်ရုံဘဲဗျာ ကျွန်တော် စုဆောင်းထားတာတွေအများကြီးဘဲရှိတယ်ဗျ။ Report လေးကို အာရုံစိုက်ပြီး
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 7:21 AM No comments:
Animation Desktop Toys
ဒီကောင်လေးကတော့ Desktop မှာ အလှဆင်တယ်ဘဲပြောရမလား။ပျော်စရာလေးတွေ
တင်ထားတယ်ဘဲပြောရမလား မသိတော့ပါဘူးဗျာ။ ကိုယ့် ရဲ့ Feeling ပေါ်မှာ ဘဲ ခေါင်းစဉ်ပြောင်းသွားနိုင်
ပါတယ်။ ဒီထဲမှာပါတဲ့ ကောင်မလေးတွေက Screen ပေါ်မှာလျှောက်သွားနေတာ မမောမပန်းနဲ့ဗျာ။ ဟီးးးးးး ၇ီစရာလည်းကောင်းပါတယ်။ မျက်စိနောက်စရာလည်းကောင်းပါတယ်။ ကွန်ပြူတာနဲ့အလုပ်တွေ
လုပ်ပြီး ခဏနားနေချိန်မှာDesktop ကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ တမျိုးလေးအမြင်ပြောင်းသွားစေမှာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ သဘောကျလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
အသုံးပြုပုံလေးကလည်းလွယ်ပါတယ်။ မိမိ သဘောကျတဲ့ ပုံစံလေးကို Double Click နှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါဘဲ။ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ အောက်က Link မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 3:01 AM No comments:
Slideshow Studio HD 1.0.2 Portable
Editing လေးတစ်ခု နောက်ထပ် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံတွေ ကို နောက်ခံ သီချင်းလေးတွေနဲ့ Slide Show လုပ်လို့ ကောင်းပါတယ်။ သူက File Size လည်းသေးတဲ့အတွက်
ဒေါင်းရတာအဆင်ပြေ ပါတယ်။ ပြီးတော့ Portable လေးဖြစ်တဲ့အတွက် Install လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ File Size သေးပြီး Portable ဖြစ်တဲ့အတွက် အထင်တော့သွားမသေးလိုက်နဲ့နော်။ သူ့လည်းသူ့အစွမ်းနဲ့
သူဘဲဗျ။ ကျွန်တော်တစ်ခါစမ်းသုံးကြည့်ဖူး လို့တင်ပေးလိုက်တာပါ
။အောက်မှာလည်း သူ့ရဲ Feature
လေးတွေထည့်ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် အောက်က Link မှာ ဒေါင်းကြပါနော်။ အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
HD Slideshows on Video, YouTube and DVD
Digital cameras have made photography easier than ever but sharing your pictures is still harder than it needs to be. Ashampoo Slideshow Studio HD changes all this. With its easy point-and-click interface and ready-to-use themes you can create great auto-playing slideshows with music and terrific animated transitions inasnap.
However, the real innovation is the output formats: You can’t just burn your slideshows to DVDs that will play on any home DVD player. You can also generate HD (high-definition) slideshows that you can upload to YouTube and MyVideo, or as MPEG2, MPEG4 or Windows Media video files that will play on pretty much any computer available. And since the slideshows are saved inasingle file sharing them couldn’t be easier.
Slideshow Studio HD lets you share your images with anyone, anywhere, now. And the slideshows look like they were created byaprofessional graphic artist – because they were.
Point and click speed meets your creativity
If you’re inahurry you just need to select your photos, select one of the great graphical themes and then click Produce Slideshow. You’ll be asked to choose your output format and whether you want HD or normal definition but that’s it.
If you want to get creative you can insert your own text and graphics on top of your slides, and also geometric shapes, photos overlaid on photos, text arranged along curves, tables, captions and more. You can also add subtitles, and “brand” your slideshows with logos in the corner. You can choose fromascore of great graphical transitions between your slides, or have random transitions for every slide. You can add multiple background music or other audio tracks and have the length of the slideshow automatically match the length of your music.
The Slideshow Editor has an intuitive timeline that shows the entire slideshow sequence graphically. You getalive preview and can edit components on the timeline with Drag & Drop. You can rotate, resize, show and hide all the elements you add to your slides, with individual fade-in and fade-out for each element.
Or you can just chooseatheme and let Slideshow Studio HD do all the work for you. Again, you choose.
Timeline editing with drag & drop and preview
Cross-fades and graphical transitions between images
Preview for all fades and transitions in the timeline
Add background music for the entire show with multiple tracks
Add titles, subtitles, shaped text
Add images, logos and graphical shapes with fill, borders etc.
Fade-in and fade-out for all objects (images, texts etc.)
Rotate images directly in the editor
Ready-to-use themes for point-and-click speed
Automatic save feature protects your work
•YouTube and MyVideo
Choose these formats to share your slideshows online on YouTube or MyVideo. You can choose the standard format or 720p HD videos.
MPEG1 gives you medium compression and only supports standard format (no HD) but it plays on all modern computers.
These formats offer better quality and compression and play on any computer with the correct codecs installed. MPEG2 and MPEG4 supports HD up to 1080p.
Here too, better quality and compression and HD up to 1080p. Windows Media9plays on any Windows machine with Windows Media Player9or higher and on many other machines with support for WMV files.
You can also burn your slideshows to standard DVDs that will play automatically when they are inserted in any DVD player, complete with the background music and transitions.
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 10:22 PM4comments:
Labels: Editing, Portable, Software
Mobile Phone game softwares
ဒါလေးကတော့ မိမိတို့ရဲ့ Phone မှာ Game လေးတွေ ထည့်ပြီးဆော့နိုင်
အောင်လို့တင်ပေးလိုက်တာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ Game အမျိုးအစားပေါင်း 15 မျိုးပါဝင်ပါတယ်။ Game လေး
တွေကလည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ဒေါင်းလို့ရမယ့် Game လေးတွေပါဘဲ။ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်အောက်
က Link မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။ ဒီ Post လေးကို Bro အာကာဖြိုး
၀၁။ စူပါမင်း နှင့် လင်းနို့လူသား ဂိမ်း Mediafire
၀၂။ ပါဝါရိန်းဂျား ဂိမ်း Mediafire
၀၃။ UFO ဂိမ်း Medirafire
၀၄။ သူခိုးခြေလှမ်း ဂိမ်း Mediafire
၀၅။ အာဂွန်နဂါး ဂိမ်း Mediafire
၀၂.3D race for s60 phones
၀၇.Real football 2010
၁၀.Land of the dead 240*320
၀၁.Tomb Raider HD
၀၃.Defend london air craft
၀၄.FERRARI GT Evolution
၀၆.high speed racing
၀၇.Pirates of the7sees
၀၉.PRINCE OF PERSIA HD
၁၀.Need For Speed Undercover
၁၂.Asphalt urban GT EVOLUTION
၀၁.High speed racing excelent
၀၂.Here of spar
၀၆.Men in black
၀၇.Crash arena 3D
၁၂.Sachins gully cricket
၁၃.WWE smackdown v/s raw 2009
၁၄.piratesof7sees 240*320
၁၅.V RALLY 3D 240*320
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 10:18 PM No comments:
Labels: Games, Phone
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 10:13 PM3comments:
Windows XP Control Panel အားအသုံးပြုခြင်း
ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာ control panel ဟာအခြေခံအကျဆုံးနဲ့ user တိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်မသိမဖြစ် လို အပ်ပါတယ်..ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ system management နဲ့ ပက်သက်တာကို ဒီနေရာက နေ အများကြီးလုပ်ဆောင်နိုင်လို့ ပဲဖြစ်ပါတယ်..ခေါင်းစဉ်က xp အတွက်လို့ ရေးထားပေမဲ့အခြား OS ဖြစ်တဲ့ windwos vista နဲ့ windows7တွေမှာလည်းအနည်းငယ်ခြားနားမှုလေးတွေသာ
ရှိပါတယ်.. detail မဟုတ်ပေမဲ့ အနည်းဆုံးတော့ ကွန်ပျူတာမှာ အနည်းငယ်တိုင်းစောင်းမှုလေးတွေဖြစ်
လာရင် control panel ထဲမှာ မိမိဘာသာမိမိ ဆောင်ရွက်တတ်စေဖို့ အတွက်အောက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါ တယ် ခင်ဗျာ..
Accessibility options မှာ keyboard,mouse ,display နဲ့ sound setting တွေကို ပြုပြင် ပြောင်းလဲ ပေးနိုင်တယ်..
Windows ကနေပြီးတော့မှ သူမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ hardware device တွေကို မမှတ်မိတော့တဲ့အခါဒီ Add Hardware မှာလာပြီးတော့ add လုပ်ပေးရပါတယ်..
အကယ်၍ များ software တွေကို ထပ်ထည့်မယ် uninstall(remove) လုပ်မယ်ဆိုရင် ဒီ Add or Remove Programs မှာလာပြီးတော့ပြင်ပါတယ်..ဆိုပါစို့ မိမိကွန်ပျူတာမှာ software တစ်ခုက အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြုတ်ရတော့မယ် uninstall လုပ်မယ်ဆိုရင် ဒီကနေ မလိုချင်တဲ့ဆော့ဝဲကို Double click ခေါက်ပြီးတော့ အဆင့်ဆင့် uninstall လုပ်နိုင်တယ်..(uninstaller tools တွေကိုသုံးပြီးတော့လဲ Remove လုပ်နိုင်တယ်)
ကွန်ပျူတာ managementပြုလုပ်ခြင်း၊မော်နီတာ ရဲ့ performance ပြုပြင်ခြင်း၊windows ရဲ့security ပိုင်းဆိုင်ရာကိုဆောင်ရွက်ခြင်း၊ကွန်ပျူတာရဲ့ service တွေကို Administering လုပ်ခြင်းတွေကို ဆောင် ၇ွက်နိုင်တယ်..
ကွန်ပျူတာက ဘယ်လို update လုပ်မလဲ ဘယ်အချိန်မှာ Update လုပ်မလဲ လာရောက်ပြုပြင်ပေးထားလို့ ရတယ်..ဘယ်ချိန်မှာ installer packet တွေကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်မှာလဲ..Installer packet တွေကိုဒေါင်းလုပ်မလုပ်ခင် userကိုမေးဦးမှာလား စတဲ့ setting တွေကို ပြုလုပ် ထားနိုင်တယ်….
ကိုယ်က Bluetooth devices အသုံးပြုနေသူတစ်ယောက်ဖြစ်နေလျင် ဒီမှာ Bluetooth ကို Add ပေးထားရပါတယ် မသုံးတော့ဘူးဆိုရင်လည်း ဒီနေရာကပဲ remove လုပ်နိုင်တယ်..
အတော်များများနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ ဒီ Date and Time setting ကတော့ ရက်စွဲ အချိန်တွေ နေရာတွေကို လာရောက်ပြုပြင်နိုင်တယ် ကွန်ပျူတာမှာ date time မှားနေရင်လည်း ဒီ option ကပဲ လာရောက်ပြုပြင်ပေးနိင်တယ်…ကိုယ်က Date and Time အမှန်တိုက်ထားပါလျက်နဲ့ခနကြာတဲ့အခါ မှားယွင်းစွာပြနေတာကတော့ cmos battery အားနည်းသွားတာဖြစ်နိင်ပါတယ်..
Display setting က မော်နီတာပေါ်မှာမြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းတွေအားလုံးကို မိမိလိုသလိုပြုပြင်ပြောင်း လဲနိုင်တဲ့ နေရာတစ်နေရာဖြစ်တယ်..မော်နီတာရဲ့ resolution တွေ color depth တွေ ကိုချိန်ညှိ ပေးနိုင်တယ် desktop background နဲ့ screensaver တို့ ကိုမိမိ ထားချင်တဲ့ Setting ပုံစံအတိုင်းပြု လုပ်ပေးနိုင်တယ်….
ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ file အနေထား folder အနေအထား တွေကိုပြင်နိုင်တယ်..file တွေကို hide လုပ်ထားတာလား virus တွေက hide file အနေနဲ့ ဝင်နေတာလားဆိုတာ ဒီ folder option ရဲ့viewsMenu ကနေကြည့်နိုင်တယ်..ဖိုင်ရဲ့ extension တွေကိုဖော်ပြထားချင်တယ်…security tab တွေကို hide လုပ်မယ်ဆိုရင် ဒီနေရာကပဲ လာရောက် management လုပ်နိုင်တယ်..တခါတစ်ရံ mouse က Single click ၀င်နေတာမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင် လည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင် တဲ့နေရာတစ် နေရာဖြစ် တယ်..folder option က virus ရေးတဲ့ သူတွေရဲ့tarket တစ်ခုအဖြစ်ထားခြင်းကိုခံရပါတယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ folder option ကနေထိန်းချူပ်နိုင်တဲ့ နေရာက အများအပြားဖြစ်နေလို့ ပါပဲ..
ဒီ Fonts option မှာ တစ်ခုထက်မကပိုတဲ့ font မျိုးစုံသုံးစွဲတဲ့အခါမှာ လာရောက် ထည့်သွင်းပေး ရပါတယ် ဥပမာ ဇော်ဂျီဝမ်းသုံးနေတယ်ဆိုပါစို့ မိမိက win innwa ဖောင့်နဲ့စာစီစာရိုက်လုပ်ချင်တဲ့အခါ စက်ထဲမှာ win အင်းဝ font ရှိနေဖို့ လိုပါတယ်..win innwa font သွင်းထားမှသာလျင် မိမိလိုချင်တဲ့ win innwa font ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ် ဒါဆိုရင် win innwa font ကို မိမိက copy ကူးပြီးတော့ ဒီ Fonts ဆိုတဲ့ နေရာလေးမှာ paste လုပ်ပေးလိုက်ရင် သုံးလို့၇ပြီဖြစ်ပါတယ်..အခြား fonts များကိုသွင်းတာလည်းထိုနည်းတူပါပဲ..
မိမိက game ကစားတဲ့သူဖြစ်တယ် joystick , steering wheel စတဲ့game တွေဆော့တော့ မယ်ဆိုရင် အချို့ သော joystick ကကွန်ပျူတာကမသိတဲ့အခြေနေတွေမှာ ဒီမှာလာပြီးတော့ Add လုပ်ပေးရတယ်..ခုနောက်ပိုင်းတော်တော်များများမှာတော့ Auto detect သိတာများပါ တယ်.. သိပ်ထွေ ထွေထူးထူးလုပ်စရာမလိုပါဘူး…
အင်တာနက် အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ web browsing ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း ၊လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ web history ကို သတ်မှတ်ခြင်း ၊connection တွေကိုထည့်ခြင်း ဖြုတ်ခြင်း proxy setting တွေကိုပြုပြင်ခြင်း စတာတွေကိုလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ နေရာဖြစ်တယ်..
ကီးဘုတ်ရဲ့ စာရိုက်နှန်း အနှေးအမြန် cursor ရဲ့ အနှေးအမြန်နဲ့blink rate တွေကိုသတ်မှတ်နိုင် တယ်..တစ်ခါတရံ Driver ကြောင့်ကီးဘုတ်က ရိုက်လို့ မရတော့ဘူးဆို၇င် update driver လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်လာတဲ့အခါ hardware ဆိုတဲ့ အောက်မှာ update driver လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်
Mouse speed တိုးခြင်းလျှော့ခြင်း၊ scrolling အနှေးအမြန်ြပုလုပ်ခြင်း၊mouse pointer ကိုပြုပြင် ပြောင်းလဲခြင်း စတဲ့ Adjusting လုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်..
Network connection အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း connection setting ပြုပြင်ခြင်းနဲ့troubleshooting လုပ်ခြင်းတို့ ကို ဒီ network connection ကနေလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်..local area network ပေါ်မှာ right click ထောက်ပြီး properties ကိုသွားရင် network နဲ့ပတ်သက် တဲ့ specifications တွေကိုလေ့လာနိုင်တယ်..
မိမိကွန်ပျူတာမှာ dialup connection အသုံးပြုဖို့ အတွက် modem တပ်ဆင်ထားတယ်ဆိုရင် modem နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ နေရာဖြစ်တယ်
Power options က ကွန်ပျူတာရဲ့ power setting တွေကို Adjust လုပ်နိုင်တယ် windows ကနေပြီးတော့ မတူညီတဲ့ power scheme တွေကိုတည်ဆောက်ထာတယ်..monitor ကိုဘယ် အချိန်မှာ အနားပေးမယ်..stanby mode ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ hard disk power ကို Turn off လုပ်မယ် မလုပ်ဘူးဆိုတာကို save လုပ်ထားနိုင်တယ်..power hibernation လုပ်ခြင်းကိုဒီနေရာကနေလုပ်ဆောင်တယ်..hibernation လုပ်တယ်ဆိုတာ မိမိက အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကွန်ပျူတာရှေ့ ကနေ တစ်နာရီ ၂ နာရီကျော်ကြာကြာထွက်ခွာသွားပြီ ဆိုရင်ကွန်ပျူတာက သူ့ အလိုလိုအလျောက် hard disk, monitor နဲ့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ် တွေအားလုံးကိုခဏနားလိုက်ပါတယ်..user က ကွန်ပျူတာရှေ့ ကိုပြန်ရောက်လို့ ကီးဘုတ်(သို့) mouse ကိုထိလိုက်တာနဲ့ အလျင်အမြန်ပြည်လည်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါတယ်..အဲလို လူမရှိတဲ့ အချိန်မှာ computer sleep ဖြစ်နေပြီး user ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါ လျင်မြန်စွာ quickly wake up လုပ်တာကို hibernation လို့ ခေါ်ပါတယ်..
ကိုယ့်မှာ printer ရှိမယ်ဆိုရင် control panel ထဲမှာ printer ကို install လုပ်ရပါတယ် ဒါမှ ကွန်ပျူတာကသိမှာဖြစ်တယ်..Add printer wizard တည်ဆောက်ပြီးမှ printer ကိုအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်..printer sharing ယူတဲ့ စက်မှာကျတော့ Add printer wizard ကိုဆောက်စရာမလိုပါ ဘူး..printer နဲ့ ကွန်ပျူတာချိတ်ဆက်ထားတဲ့ စက်တစ်လုံးသာ လျင်လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်..
ဘာသာစကားတစ်ခုထက်ပိုတဲ့language တွေကိုအသုံးပြုရတဲ့အခါမှာ ဒီနေရာမှာ လာပြီးတော့ add ပေးရတယ်..တရုတ်၊ဂျပန်၊ရုရှား စတဲ့language တွေကို add ပေးလိုက်တာနဲ့ အသုံးပြုနိုင်တယ် ..သီးသန့် ဆော့ဝဲနဲ့ တင်ပေးစရာမလိုတော့ဘူး..ကီးဘုတ်မှ ကီးတွေ ရိုက်လို့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့language မထွက်တဲ့အခါမျိုး၊key setting Adjust လုပ်နိုင်တယ်..Alt+shift+Ctrl
Scanner အသစ်ဆိုရင် ကွန်ပျူတာက ကိုယ်တပ်ဆင်လိုက်တဲ့ scanner ကို သိဖို့ဒီနေရာမှာ လာပြီးတော့Add ပေးရတယ်…
ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူအနေဖြင့်အလုပ်များလို့ ပဲဖြစ်ဖြစ် ကွန်ပျူတာကို ဘယ်အချိန်ကျရင် maintainance လုပ်မယ်ဆိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မေ့နေရင် Scheduled Tasks ဆွဲပြီး လုပ် ဆောင်နိုင် တယ်..ဥပမာ defragment လုပ်မယ်ဆိုပါစို့ တစ်ပတ်မှာ ဘယ်နေ့ ဘယ်အချိန် မှာ defragmenent လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ သတ်မှတ်ပေးလို့ ရပါတယ်..တစ်ခုတော့ရှိတယ်..scheduled tasks ဆွဲထား တဲ့အတိုင်းဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုရင် ကွန်ပျူတာတော့ဖွင့်ထားဖို့ လိုမယ်..
Computer Security နဲ့ ပက်သက်တဲ့ virus protection ပြုလုပ်ခြင်း automatic updates ပြုလုပ်ခြင်း firewall on/off ပြုလုပ်ခြင်း စတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကိုလာေ၇ာက်ပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်
Sounds and Devices
အသံနဲ့ ပက်သက်တဲ့ sound setting ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ ရနိုင်တဲ့ နေရာဖြစ်ပါတယ်..volume ကိုmute (ပိတ်ထားခြင်း)လုပ်ခြင်း taskbar မှာ speaker icon ထားခြင်း/ဖြုတ်ခြင်း sound channel ကို2.1(သို့ )5.1 ထားခြင်းစတာတွေကိုပြုလုပ်နိုင်တယ်..
ကွန်ပျူတာမှ document တစ်ခုမှ text တစ်ပုဒ်ကို အသံထွက်ဘာသာပြန်ခိုင်းတယ်ဆိုပါစို့အဲလိုဘာသာပြန်ရာမှာဒီနေရာကနေ မိမိလိုသလို အနှေးအမြန် သတ်မှတ်ပေးနိုင်တယ်….
System ကနေဘာလုပ်လို့ ရနိုင်သလဲဆိုရင် computerရဲ့configuration တွေ hardware profileတွေ ကို detail ကြည့်ရှု့ နိုင်တယ်..Device manager ကိုလဲသွားနိုင်တယ် virtual memory(page file ) တွေသတ်မှတ်ပေးနိုင်တယ်..ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့ တစ်လုံး remote desktop နဲ့ ဆက်သွယ်မယ်ဆို Allow ပေးဖို့ အတွက် Remote Desktop ကိုသုံးပြုနိုင်တယ်..
Taskbar and Start Menu.
Taskbar နဲ့ start menu မှာ မိမိလိုချင်တဲ့ icon တွေကို ဘယ်icon တွေကိုတော့ ထားမယ်/ဖြုတ်မယ်..taskbar ကို hide လုပ်မယ်/မလုပ်ဘူး စတာတွေပြင်နိုင်တယ်..
User account တွေလုပ်မယ်..password ပေးမယ်(သို့ )password ကို remove လုပ်မယ်.account type တွေ change မယ် Account ရဲ့icon တွေကို မိမိလိုချင်တဲ့ icon ပြောင်းလဲမယ်..စတာတွေကို လုပ်နိုင်တယ်..
Windows firewall on/off လုပ်မယ်ဆိုရင် ဒီနေရာမှာပြင်နိုင်တယ်..ဘာကြောင့်fire wall on/off
လုပ်ရသလဲဆိုရင် တစ်ချို့ သော sharing file တွေကျတော့ workgroup မှာလာလာညှိတတ်လွန်းလို့firewall ကို off လုပ်ထားပေးမှရတာတွေရှိတယ်…နောက် virus အန္တရယ် ကိုလဲကာ ကွယ် ပေး နိုင်တယ်..
Wireless Network Setup Wizard
အချို့ သောWireless network ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် စက်မှာအရင် setupလုပ်ပေးရတယ်..setup လုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုရင် ဒီနေရာမှာလုပ်ပေးရမယ်..ခုနောက်ပိုင်း တော်တော်များများတော့ တန်းချိတ်လို့ ရပါတယ်..
Post by ကိုစံငြိမ်း........
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 10:10 PM No comments:
Labels: IT ဗဟုသုတ
World Of Fantasies Screensaver (12MB)
ဒီတခေါက်လည်း Screensaver လှလှလေးတစ်ခု တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူကတော့ ကာတွန်းပုံကောင်မလေးနဲ့ သဘာဝရှုခင်းလေးတွေ ကျေးငှက်လေးတွေ လိပ်ပြာလေးတွေနဲ့သာယာဖွယ်
လေးပါ။ မျက်စိအေးစေတာပေါ့ဗျာ။ ရုပ်ထွက်လေးကလည်း အင်မတန်ကောင်းတယ်ဗျ။ဒေါင်းရ အဆင်ပြေအောင် Link သုံးမျိုးနဲ့တင်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။ အဆင်ပြေတဲ့ Link မှာသာဒေါင်းယူကြပါဗျာ။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 10:05 PM No comments:
Labels: Screen Saver, Software
မေးလ်ဝင်လာတာနဲ့ AutoReply Massage လေးပြန်ပို့ချင်တယ်ဆိုရင်
ကျွန်တော့်ကို မေးလ်ထဲကနေ မေးထားတာလေး ရှိလို့ ရေးပေးလိုက်ပါတယ် .. မသိသေးတဲ့ သူများအတွက်သာ ရည်ရွယ်ပါတယ် .. ကျွန်တော်တို့ ဆီကို တစ်ယောက်ယောက် ကပို့လိုက်တဲ့ မေးလ်တစ်စောင်စောင် ၀င်လာတာနဲ့ မိမိတို့ဆီက Auto Reply ပြန်လုပ် ပေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းလေးပါ .. လုပ်နည်းလေးကတော့ လွယ်ပါတယ် .. ကျွန်တော် အောက်မှာ လိုက်လုပ်ရတာ အဆင်ပြေအောင် ပုံလေးတွေနဲ့ ဖော်ပြ ပေးထားပါတယ် ..
အရင်ဆုံး မိမိတို့ G-Mail အကောင့်ကို ၀င်လိုက်ပါ .. ပြီးရင် Setting ကိုသွားလိုက်ပါ ..ကျွန်တော် အောက်မှာလည်း ပုံလေးတွေနဲ့ ပြပေးထားပါတယ် ..
ဒီအောက်က ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Subject မှာ မိမိတို့ရေးချင်တဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို ရေးလိုက်ပါ .. Massage မှာတော့ မိမိတို့ ရေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို ရေးလိုက်ပါ .. ပြီးရင် Out of Office AuteReply on ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ .. ပြီးရင် Save Change ပေးလိုက်ပါ ..
ဒါဆိုရင် မိမိတို့ဆီကို မေးလ်တစ်ခု ၀င်လာပြီ ဆိုတာနဲ့ မိမိတို့ ရေးထားတဲ့ Massage လေးကို AutoReply ပြန်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ..
အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ..
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 10:01 PM No comments:
Screensaver လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ နည်းနည်းတော့ အသည်းယား
စရာကောင်းသဗျာ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပုံမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းဘဲ မြွေတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ Screensaver လေး မို့လို့ပါ။ ဒါပေမယ့် အဲလိုမျိုး အသည်းယားစရာ ၊ ကြောက်စရာတွေကိုမှနှစ်သက်
တက်တဲ့ ကျွန်တော့်လိုမျိုး ဘော်ဒါတွေ ညီကိုတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာLink သုံးမျိုးပေးထားပါတယ်။အဆင်ပြေတဲ့ Link နဲ့သာဒေါင်း
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 9:58 PM No comments:
အခုတင်ပေးလိုက်တာလေးကတော့ မိမိရဲ့ Account တွေ ၊ Online မှ မိမိရဲ့ အချက်အလက်တွေ ကို Hack ခံရခြင်းမှကာကွယ်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Internet ဆိုင်မှာ သုံးသူတွေအများအားဖြင့်လိုအပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အင်တာနက်ဆိုင်တော်တော်များများမှာ Keylogger တွေ Run ထားတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ ကျွန်တော် ဆိုင်တိုင်းကိုမရည်ရွယ်ပါဘူးနော်။
အဲဒါကြောင့် ဒါလေးကို Memory Stick နဲ့ယူသွားပြီး ဆိုင်ရောက်တာနဲ့ Run လိုက် ပါ။ ဒါဆိုရင် မိမိအသုံးပြုတဲ့စက်မှာ Keylogger ရှိမရှိ သိရမှာဘဲဖြစ်
ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်အောက်က Link မှာဝင်ပြီးဒေါင်းကြည့်ပါနော်။ အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 9:22 PM 1 comment:
Labels: Hacking, Software
ကျွန်တော်တို့တွေအသုံးပြုနေတဲ့ Facebook အကောင့်တွေကိုအကြောင်းအမျိုးအမျိုးကြောင့်
အ၇င်ဆုံးမိမိဖျက်ချင်တဲ့အကောင့်ကိုဝင်လိုက်ပါ။ပြီး၇င် ဒီလင့် လေးကိုသွားလိုက်ပါ။ Submit ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Permanently Delete Account ဆိုတဲ့ဘောက်လေးကျလာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီဘောက်လေးထဲမှမိမိတို့
ဖျက်ချင်တဲ့အကောင့်၇ဲ့ password နဲ့ Txet in the box ထဲမှာသူပေးထာတဲ့စာလုံးလေးတွေကို၇ိုက်
ထည့်ပြီး Okay ပေးလိုက်ပါ။နောက်ထပ်တခါထပ်ပြီးတော့ Okay ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆို၇င်အကောင့်ကို
ဖျက်လိုက်ပါလိမ့်မယ်။တကယ်လို့ အဲ့ဒီအကောင့်လေးကိုပဲပြန်လိုချင်တယ်ဆို၇င်တော့ 14 ၇က်အတွင်း
အကောင့်နဲ့ပတ်ဝတ်ကို၇ိုက်ပြီးပြန်ယူလို့ပါတယ်။ 14 ၇က်ကျော်သွား၇င်တော့အကောင့်ကလုံးဝပျက်
ဒီ Post လေးကို ကို နေမင်းမောင် ထံမှ ပြန်လည်မျှပေးပေးပါသည်။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 7:24 PM No comments:
Labels: Facebook, IT ဗဟုသုတ
Nokia Phone ရှိတဲ့သူတွေအတွက် နောက်ထပ် Theme ပေါင်း တစ်ရာ
Phone နဲ့ပါတ်သတ်တဲ့ Application လေးတွေ တင်ဖို့ စိတ်ကူးရှိတာကြာပါပြီ။ ဖုန်းအမျိုး
အစားပေါင်းစုံအောင်တင်ပေးချင်တာပါ။ ဒါပေမယ့် အခုတလော NOKIA Phone တွေအတွက်ဘဲတင်ဖြစ်
မယ်ထင်ပါတယ်ဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရွှေမန်းသူချောချောလေးတစ်ယောက်အတွက်ပေါ့ဗျာ။ ဟားဟားဟား သူက Nokia Touch Phone လေးကိုင်ထားတယ်ဗျ။ အဲဒါကြောင့်သူ့အတွက်နဲ့ နောက်ထပ် Nokia အသုံးပြုနေတဲ့ သူတွေ အတွက် ပါရည်ရွယ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ
ရှည်နေတာနဲ့ဘဲ လိုရင်းကိုမရောက်တော့ဘူးဗျာ အခုတင်ပေးမှာကတော့ Nokia Phone အတွက် Theme လှလှလေးတွေ စုစုပေါင်း 100 တင်ပေးလိုက်ပါ တယ်ဗျာ စိတ်ပါဝင်စားသူများ ဒေါင်းလုပ် ဆွဲယူနိုင်
ဒါလေးကတော့ အသုံးပြုလို့ရမယ့် Nokia Phone အမျိုးအစားတွေပါ
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 2:07 AM No comments:
Labels: Phone, Theme
Nokia Phone ရှိတဲ့သူတွေအတွက် Theme အလန်းလေးတွေ
တစ်ယောက်သောသူအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတင်ပေးလိုက်တဲ့ Post လေးပါဗျာ။ ဟဲဟဲဟဲ အဲလိုပြောလို့လည်း တမျိုးကြီးမထင်သွားပါနဲ့နော်။ အသုံးတည့်မယ့်သူတွေအားလုံးအတွက်
လည်းပါတာပေါ့ဗျာ။ Theme တွေကတော့မျိုးစုံဘဲဗျ။ တော်တော်လေးလန်းတယ် ပုံလေးကိုကြည့်ပါ
လား သူ့ရဲ့ ပါဝင်တဲ့ Feature တွေကိုလည်းထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အောက်က Link မှာယူကြပါဗျာ။ အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေနော်။
Full SVG themes for 240×320 and 360×640 Pixel Screen
Using Omnia HD Style icon pack by Me
Actually this was modified Stripe Gold theme, i’m not satified after install on nokia 5800 for previous version
Working for Nokia 3rd fp1, fp2, 5800xm and N97, Samsung Omnia HD
5320 XpressMusic, 5700 XpressMusic, 6110 Navigator, 6120 Classic, 6121 Classic, 6124 classic, 6210 Navigator, 6220 classic, 6290, N71, N73, N75, N76, N78, N79, N81, N81 8GB, N85, N82, N92, N93, N93i, N95, N95 8GB, N95-3NAM, N96, 5800 Xpress Music, N97, i8910, Samsung Omnia HD, 5530
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 2:02 AM No comments:
ရုပ်ပွားဆင်းတုတော်က ခိုက်တာလား… ဗေဒင်ဆရာက ရိုက်တာလား…
လွဲနေတာလေးတွေကို ပြောနေရင်း နောက်ထပ်အလွဲ တစ်ခုကို သွားသတိရမိပါတယ်။ ဘုန်ဘုန်းမြန်မာပြည်မှာ ရှိနေတဲ့ အချိန်တုန်းက ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့ ဒကာမတစ်ယောက် စကျင်ကျောက်နဲ့ ထုလုပ်ထားတဲ့ ရုပ်ပွားဆင်းတုတော် တစ်ဆူယူလာပြီး ဘုန်းဘုန်းကျောင်းကို ရောက်လာပါတယ်။ဒကာမက “အရှင်ဘုရား… ဒီဘုရားလေး အရှင်ဘုရားကျောင်းမှာ ထားချင်လို့ပါဘုရား..”တဲ့။ ဘုန်းဘုန်းက “ဒကာမ ဒီဆင်းတုတော် တော်တော်သပ0x081ပါယ်သားပဲ..၊ ဆိုင်ကဝယ်ယူပြီး ပူဇော်တာလား..၊ ဘာအတွက် လာလှူတာလဲ..” စသဖြင့် မေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီတော့ ဒကာမက “ဆိုင်ကဝယ်လာတာ မဟုတ်ဘူးဘုရား…၊တပည့်တော်မတို့ အိမ်မှာကိုးကွယ် ပူဇော်ထားတဲ့ ဆင်းတုတော်ပါ၊ အိမ်မှာ အစစ အရာရာ အဆင်မပြေ ဖြစ်နေလို့ ဗေဒင်ဆရာ သွားမေးကြည့်တော့ ဗေဒင်ဆရာက အိမ်မှာကိုးကွယ်ထားတဲ့ ဘုရားဆင်းတုတော်က ခိုက်တာ၊ အဲဒီဆင်းတုတော်ကို ဘုန်းကြီးကျောင်းဖြစ်ဖြစ်၊ ဘုရားစေတီမှာရှိတဲ့ ညောင်ပင်ရင်းမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် သွားလှူလိုက်ပါလို့ ပြောလို့ အဲဒါ အရှင်ဘုရားကျောင်းမှာ လာလှူတာပါဘုရား…”တဲ့။ရင်ထဲမှာ တော်တော်ကို မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ ဒါလားဟဲ့ ဗုဒ0x081ဓဘာသာလို့လည်း စိတ်ထဲမှာ ရေရွတ်မိပါတယ်။ ဘုရားဆင်းတုတော်ကို ကျောင်းမှာလာလှူတာပါတဲ့။ ပြောလိုက်တဲ့စကားက လှူတယ်ပေါ့။ တကယ်တော့ ဗေဒင်ဆရာစကားအတိုင်း အိမ်မှာခိုက်လို့ ကျောင်းမှာလာစွန့်တာပါပဲ။ ဘုရားဆင်းတုတော်က ခိုက်တာဆိုပဲ။ ဆင်းတုတော်က ခိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဗေဒင်ဆရာက ရိုက်တာပါ။ဗေဒင်ဆရာရိုက်တာကို ဆင်ခြင်တုံတရားမရှိ၊ အမှားအမှန် မခွဲခြားဘဲ လိုက်လုပ်နေကြတာပါ။ ဘုရားစင်မှာ လူတွေဘာပဲ ကပ်ကပ် အကောင်းအဆိုး၊ ဘာမှမပြော၊ ဘယ်လိုပဲနေနေ ဘာမှမလုပ်ပဲ အချိန်ပြည့် ထားတဲ့နေရာမှာ ရှိနေတဲ့ ဒီရုပ်ပွားဆင်းတုတော်ကပဲ ခိုက်တယ်လို့ စဉ်းစဉ်းစားစား လုပ်ကြပါဦး။ ကိုယ့်ကံနိမ့်နေ၊ ကိုယ့်လုပ်ရပ်ကြောင့် ကိုယ့်ဖာသာ မကောင်းတာတွေ ဖြစ်နေတာကိုပဲ ဘုရားကိုပုံချပြီး ဘုရားက ခိုက်တယ်ပဲ ရှိရသေးတယ်။ယနေ့ခေတ် ဗုဒ0x081ဓဘာသာ အများဟာ မကောင်းတာတွေကြုံ ဒုက0x081ခတွေဖြစ်ပြီဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မကြည့်၊ ပြန်မစိစစ်တော့ဘဲ နီးစပ်ရာအားကိုးမှုကို ရှာတတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားမကိုးဘဲ သူများအားကိုပြီး ဟိုမေးဒီမေး လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ နောက်ဆုံး အဲဒီလို လူမျိုးတွေကို စောင့်စားနေကြတဲ့ ဗေဒင်လက0x081ခဏာ နတ်ဂိုဏ်းဆရာတွေဆီ ရောက်ကုန်ပါလေရော။ဗေဒင်ဆရာစတဲ့ သူတွေဆိုတာ သူတို့ဆီရောက်လာတယ် ဆိုရင် အပူတစ်ခုခုရှိလို့ ရောက်လာတယ်ဆိုတာ သိထားပြီးသားဆိုတော့ ရောက်တာနဲ့ တန်းပြီး အဆင်မပြေတာ တစ်ခုခု ရှိနေတယ်မဟုတ်လားဆိုတော့ ရောက်လာသူက ဟာ…သူသိနေပါလား..၊ ဘာမှ မပြောရသေဘူး သိပ်မှန်ပါလားနဲ့ သူပြောသမျှမှာ အကုန်ယုံ၊ အကုန်လိုက် လုပ်တော့တာပါပဲ။ အဲဒီ တစ်လွဲယုံကြည်မှု အားကောင်းခြင်းက ကိုယ့်အိမ်မှာ ကိုးကွယ်တဲ့ ဘုရားဆင်းတုတော်ကို စွန့်တဲ့အထိ ဖြစ်ကုန်ပါတော့တယ်။တကယ်တော့ ဗုဒ0x081ဓဘာသားများဟာ ယုံကြည်မှုကို စူးစမ်းဆင်ခြင်မှုနဲ့ ပေါင်းစပ်ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။ နေရာတကာ အယုံကြည် မလွယ်သင့်ပါဘူး။ ဘယ်သူမပြု မိမိမှုဆိုသလို သေချာတွေးကြည့်ရင် အစဉ်ပြေမှု မပြေမှုဆိုတာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် လုပ်ခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်တွေရဲ့ အကျိုးရလာဘ်ပါပဲ။အကောင်းအဆိုး ဆိုတာက လူတိုင်းကြုံတွေ့ရမယ့် လောကဓံပါ။ လောကမှာ ရှိနေရင်တော့ အကောင်းတွေနဲ့ ကြုံနေတတ်ရသလို အဆိုးတွေလည်း ရောက်နေမှာပါပဲ။ ဒီလောကဓံကို ဘာပဲလာလာ ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် လုပ်ရမှာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ကိုယ်ဆင်ခြင်ရမှာပါ။ အဲဒါကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားမကိုးဘဲ သူများသွားအားကိုတော့ သူများခိုင်းတဲ့အတိုင်း လုပ်ရင်းက ကိုယ်ပါအပြစ်ဖြစ်ကာ ဘုရားမကြောက်၊ ကံမကြောက် ဖြစ်ကုန်တော့တာပါ။နောက်ဆုံးတော့ ဗေဒင်ဆရာကို အားကိုးမိလို့ ဗေဒင်ဆရာ ရိုက်တာခံရတဲ့အတွက် မလုပ်သင့်တဲ့ အကုသိုလ် အလုပ်ကို လုပ်ဖြစ်ကုန်တော့တာပါ။ အမှန်ဖြစ်သင့်တာက အဆိုးတွေ ကြုံနေ၊ အဆိုးတွေ များနေရင် အကောင်းကို များများလုပ်သင့်တာပါ။ အဆိုးတွေပြီးရင် အကောင်းတွေ လာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ ခံယူချက်နဲ့ အဆိုးဒဏ်ကို ကြံ့ကြံ့ခံပြီး အကောင်းတွေပဲ ဖိလုပ်သင့်ပါတယ်။အကောင်းတွေ လုပ်နေရင်း အဆိုးတွေ ကြုံခဲ့ရင်တောင် တအားဆိုးဆိုးဝါးဝါးတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ အဆိုးတွေကြုံလို့ သူများအားကိုးပြီး ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်မိရင် အဆိုးတွေဟာ ပိုပြီးဆိုးလာတတ်ပါတယ်။ အပါယ်လားစေနိုင်တဲ့ အဆိုးတွေအထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ခိုက်တယ်ဆိုတာ ရုပ်ပွားဆင်းတုတော်က ခိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်လုပ်ရပ်တွေက ကိုယ့်ကို ပြန်ခိုက်စေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အခိုက်အတန့် အဆိုးတွေနဲ့ ခိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အကောင်းတွေပဲ ဖိလုပ်နေဖို့လိုပါတယ်။အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မပြုပြင်၊ အကောင်းတွေနဲ့ မပြင်ဆင်ဘဲ သူများအားကိုပြီး ဗေဒင်ဆရာမေးတဲ့အဆင့် ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ ဘုရားဆင်းတုတော်တွေပါ စွန့်ခိုင်းတတ်ကာ အပါယ်အထိရောက်အောင် ထိုပုဂ0x081ဂိုလ်များက ရိုက်တတ်တဲ့အတွက် ဗေဒင်ဆရာရိုက်မှာကို သတိပြုဆင်ခြင်ကြဖို့ မှားတတ်တဲ့အမှားတစ်ခုအဖြစ်သတိပေးတင်ပြလိုက်ပါတယ်။....နေမင်းခhttp://www.futurestars-mm.com/group/Buddisim/forum/topics/6405389:T... မှ ပြန်လည်ကူးယူ ပူဇော် ဖော်ပြပါသည်။" ဗုဒ0x081ဓဘာသာဝင် အားလုံး အယူလွဲများမှကင်းဝေးကြပါစေ "“အားလုံး ဘေးရန် ကြောင့်ကြ ဆင်းရဲကင်း၍ ကိုယ် စိတ် နှစ်ဖြာ ချမ်းသာကြပါစေ”မေတ0x081တာရပ်ခံချက်။ ။ ဘာသာ သာဿနာ တိုးတက်ရေးအတွက် အားလုံးတက်တက်ကြွကြွရှိကြစေချင်ပါတယ် ။တုံ့ပြန်မှုလေးတွေရှိစေချင်ပါတယ်။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 9:13 PM 1 comment:
Mega Cars Screensaver
ကားအလန်းလေးတွေကို သဘောကျတဲ့သူတွေကတော့ အကြိုက်တွေ့စေမှာပါ။ ဒီ Screen Saver ကိုတော့ကျွန်တော်မသုံးဖူးပါဘူး။ သူများသုံးနေတာကိုတော့မြင်ဖူးတယ်ဗျ။ မဆိုးပါဘူး ကားလှလှလေးတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ Screensaver လေးပါ။ ဒေါင်းရအဆင်ပြေအောင် Link သုံးမျိုးနဲ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အဆင်ပြေတဲ့ Link ကနေ ဒေါင်းယူကြပါဗျာ။ အားလုံးဘဲအဆင်ပြေ
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 8:18 PM No comments:
Winodws 8 Vs Mac Lion Theme For Windows 7
Theme လေးတွေတင်ရတာ အရှိန်ရလာတာနဲ့ ဘဲ အခုလည်း Winodws 8 Vs Mac Lion Theme လေးတစ်ခု ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒေါင်းရအဆင်ပြေအောင် Link သုံးမျိုးကနေပြီးတင်ပေးလိုက်ပါ တယ်။ အောက်က အဆင်ပြေမယ့် Link မှာသာဒေါင်းကြပါဗျာ။ အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေနော်။
Winodws 8 Vs Mac Lion Theme
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 3:38 AM No comments:
ကာတွန်းပုံလေးတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ Screen Saver လေးပါဘဲ။ ဒေါင်းရအဆင်ပြေအောင် Link သုံးမျိုးနဲ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် အောက်က Link မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 3:35 AM No comments:
"ဘယ်သူ ကဲ့ရဲ့ ကဲ့ရဲ့၊ ဘုရားမကဲ့ရဲ့အောင်နေ"
ဆရာတော်ဦးဗုဓ်ဆိုတာ ကုန်းဘောင်ခေတ် ဘကြီးတော်မင်းတရားနဲ့
နန်းမတော်မယ်နုတို့ လက်ထက်မှာ ပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့ ဆရာတော်ပါ။ နန်းမတော်မယ်နု
ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းတဲ့ အုတ်ကျောင်း တော်ကြီးမှာ သီတင်းသုံးခဲ့လို့
း ခေါ်ကြပါတယ်။ ဆရာတော်
ဦးဗုဓ်သီတင်းသုံးခဲ့တဲ့ မယ်နုအုတ်ကျောင်းတော်ကြီးဟာ အင်းဝမှာ ဒီနေ့အထိ
ဆရာတော်ဦးဗုဓ်ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံ ပရိယတ္တိပညာရေးသမိုင်းမှာ
စာအတတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ပညာရှင်အသီးသီးက (လယ်တီဆရာတော်တို့ အပါအ၀င်ပေါ့)
တညီတညွတ်တည်း အသိအမှတ်ပြု ထားရတဲ့ ဆရာတော်ပါ။ ဗုဓ်အစ၊ ဗုဓ်အလယ်၊
ဗုဓ်အဆုံးဆိုပြီး ဥဒါန်းစကား တွင်ရစ်ခဲ့တာပါ။
အဲဒီဥဒါန်းစကားရဲ့အဓိပ္ပါယ်က ဗုဓ်အစဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘုရား၊ ဗုဓ်အလယ်ဆိုတာ
အရှင်မဟာဗုဒ္ဓ ဃောသပါ။ အရှင်မဟာဗုဒ္ဓဃောသဆိုတာက
သီရိဓမ္မာသောကမင်းပေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ပေါ်ထွန်းခဲ့ တဲ့ထေရ်အရှင်ပါ။
ဘုရားဟောပါဠိတော်အားလုံးရဲ့အဖွင့်ဖြစ်တဲ့ အဋ္ဌကထာတွေကို ရေးသားခဲ့ ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ စကားစပ်လို့ပြောရရင် ပါဠိတော်ရယ်၊ အဋ္ဌကထာရယ်၊ ဋီကာရယ်ကို
ကွဲကွဲပြားပြား သိထားစေချင်ပါတယ်။ ပါဠိတော်ဆိုတာအဋ္ဌကထာ ဆိုတာ
ဘုရားဟောပါဠိတော်တွေကို ဥာဏ်နုသူတွေ လေ့လာကျက်မှတ်တဲ့အခါ မရှင်းမလင်းနဲ့
အခက်အခဲတွေ့မှာစိုးလို့ ပါဠိပုဒ်တစ်ပုဒ်ချင်းကို ဖွင့်ဆိုအကျယ်ချဲ့ပြီး
ရေးသားထားတဲ့ ကျမ်းစာပါ။ ဋီကာဆိုတာကတော့ အဲဒီအဋ္ဌကထာကျမ်းကို တစ်ခါထပ်ပြီး
မရှင်းမှာစိုးလို့ဆိုပြီး ထပ်ဆင့်ဖွင့်ဆိုတဲ့ အနုဋီကာ၊ မဓုဋီကာဆိုတာတွေလဲ
ရှိပါသေး တယ်။ ဒါက ကျမ်းစာအမျိုးအစားတွေကို ခွဲခြားသိရအောင် ပြောပြတာပါ။
ဘုရားဟောခဲ့တဲ့ မူရင်းစကားတွေကို ခေါ်တာပါ။
အထက်ကစကားကိုပြန်ကောက်ရင် ဗုဓ်အဆုံးဆိုတာကတော့ ဆရာတော်ဦးဗုဓ်ပါပဲ။
ဆိုလိုရင်း ကတော့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရယ်၊ အရှင်မဟာဗုဒ္ဓဃောသ ရယ်၊
ဆရာတော်ဦးဗုဓ်ရယ် အဲဒီသုံးပါးဟာ ဗုဒ္ဓဘာ သာပညာအရာမှာ ခေတ်ကာလအလျောက်ပေါ့
ဆရာတော်ဦးဗုဓ်ဟာ မြန်မာပြည်မှာ စာအတတ်ဆုံးလို့ဆိုကြတာကတော့ ဆရာတော်ရဲ့
နောက်ခံသမိုင်းတစ်ခုတည်းကိုကြည့်ပြီး ပြောကြတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
အဓိက,ကတော့ ဆရာ တော်ပြုစုခဲ့တဲ့ ကျမ်းစာတွေရဲ့ အတိမ်အနက်ကိုကြည့်ပြီး
ဆုံးဖြတ်ကြတာပါ။ ဒီနေရာမှာ ဆရာတော် ဦးဗုဓ်ရဲ့ စာပေစွမ်းရည်ကို
အရင်မပြောခင်ဆရာတော်နဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်း
အနည်းငယ်ပြောပြချင်ပါသေးတယ်။ ပထမဆုံးတွေ့ရတာက ဘကြီးတော်မင်းတရားနဲ့
နန်းမတော် မယ်နုပါ။ အထူးသဖြင့်တော့ နန်းမတော်မယ်နုပေါ့လေ။
ဆရာတော်ဦးဗုဓ်ဟာ မင်းနဲ့ မိဖုရားနှစ်ပါး အထူးကိုး ကွယ်တဲ့ ဆရာတော်ပါ။
ဒါပေမဲ့ ဆရာတော်ဟာ မင်းနဲ့ မိဖုရားနှစ်ပါးကို မျက်နှာသာမပေးခဲ့ ပါဘူး။
အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာလို့ ပြောစရာရှိရင်လဲ တိုတိုတုတ်တုတ်နဲ့ ထိထိမိမိ
ခပ်ပြတ်ပြတ်သာ ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ မျက်နှာသာမပေးပုံကတော့
အုတ်ကျောင်းတော်ကြီးပေါ်ကို ရောက်ရောက်ချင်းပဲ ဇာတိပြတော့တာပါပဲ။
မင်းမိဖုရားနှစ်ပါးက ဆရာတော်ဦးဗုဓ်ကိုပင့်ပြီး အုတ်ကျောင်းတော်ကြီးကို
ရေစက်ချလှူဒါန်းပါတယ်။ အဲဒီကျောင်းရေစက်ချပွဲမှာ ပရိသတ်ကလဲ စုံလှပါတယ်။
ရဟန်းပရိသတ် လူပရိသတ်ပေါ့။ အဲဒီမှာ ရေစက်ချပြီးတော့ မင်းနဲ့
မိဖုရားနှစ်ပါးက ဆရာတော်ဦးဗုဓ်ကို သြ၀ါဒပေးဖို့ တောင်းပန်ပါတယ်။
ဆရာတော်က ဘယ်လိုသြ၀ါဒ ပေးသလဲဆိုတော့ "မင်းနဲ့တူအောင်ကျင့်က ငါတို့
ဆုံးမသြ၀ါဒပေးရန်မလို၊ မင်းနဲ့တူအောင် မကျင့်ပါက ငါတို့နှင့် မဆိုင်
အ၀ီစိနှင့်သာဆိုင်သည်"တဲ့။ ကဲ ဘယ်လောက်တိုပြီး ဘယ်လောက်ထိမိလိုက်သလဲ။
ဆရာတော်နဲ့ မင်းမိဖုရားတို့ဟာ အခုမှတွေ့ကြ တာပါ။ အရင်က မတွေ့ဖူးပါဘူး။
ဆရာတော့်ဘ၀သမိုင်းစာမျက်နှာမှာ စကားပြောတာ သိပ်မတွေ့ရပါ ဘူး။
အမြဲစာကြည့်စာရေးအလုပ်နဲ့ပဲ အချိန်ကုန်နေတာ ပါပဲ။ မန္တလေးက
စာချဆရာတော်တစ်ပါးပြော သလို ပရိယတ္တိနဲ့ ကိလေသာကို ပယ်ထားတဲ့သဘောပါ။
ဆရာတော်က မလွှဲမရှောင်သာ စကားပြော ရရင်လဲ တိုတိုနဲ့ထိထိမိမိပဲ
ဆရာတော် စကားကိုထိထိမိမိပြောတတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမတ်ကြီးဦးပေါ်ဦးကို
ပြေးပြီးသတိ ရမိပါသေးတယ်။ အမတ်ကြီးဦးပေါ်ဦးဆိုတာ စကားအလွန်တတ်တဲ့
ပညာရှိအမတ်ကြီးအဖြစ် အား လုံး သိထားပြီးသားပါ။ ဒီလိုနဲ့
အမတ်ကြီးရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ ဆရာတော်က ရေကန်အနီးမှာ တံမြက်လှည်းနေပါတယ်။
အဲဒီတော့ အမတ်ကြီးက ကျောင်းတလင်းပြင်ပေါ်မှာပဲ ဦးချကန်တော့ရတယ်ပေါ့။
ဦးချပြီးတော့ ဆရာတော်နဲ့ အမတ်ကြီးဦးပေါ်ဦး အပြန်အလှန် စကား
ဆရာတော်.....နီးတိုင်းသာသိရမယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့နှုတ်ခမ်းမွေး ဘယ်နှစ်ပင်ရှိသလဲ။
ဦးပေါ်ဦး.........သတိမထားမိ၍ ဘယ်နှစ်ပင်ရှိကြောင်း မသိပါဘုရား။
ဆရာတော်.....သင့်နှုတ်ခမ်းမွေးကိုမှ ဘယ်နှစ်ပင်ရှိကြောင်းမသိဘဲ ဒီရေကန်ရဲ့
ဆရာတော်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့် အမတ်ကြီးဦးပေါ်ဦးလဲ ရှေ့ကို
စကားမဆက်နိုင်တော့ ပါဘူး။ ဦးချပြီး ခပ်ကုတ်ကုတ်နဲ့ ပြန်သွားရပါတော့တယ်။
ဆရာတော်ဟာ အပြောအဆိုသာထိမိတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ အပြုအမူပိုင်းမှာလဲ
ထိမိလှပါတယ်။ အပြုအမူထိမိပုံကတော့ ကျမ်းပြုတဲ့ရဟန်းငယ်တစ်ပါးနဲ့
တစ်နေ့မှာ ရဟန်းငယ်တစ်ပါးဟာ ဆယ်ကြောင်းပေ, သုံးအင်္ဂါရှိတဲ့
ကျမ်းတစ်စောင်ရေးသားပြီး ဆရာတော်ထံယူလာပါတယ်။ ဆရာတော်ထံရောက်တော့
သူ့ရဲ့ကျမ်းစာကိုကြည့်ရှုပြီး အမှားရှိရင် မှားတဲ့နေရာကို
ထုံးစက်ပြပေးပါဘုရားတဲ့။ ဆရာတော်ကလည်း "အေး....ထားခဲ့။ မနက်ဖန်ညနေ
ရဟန်းငယ်ရေးတဲ့ကျမ်းစာကို သေချာကြည့်ရှုပါတယ်။ ကြည့်ရှုတော့ ကျမ်းစာက
တစ်စောင် လုံး ကမောက်ကမနဲ့ အမှားတွေချည်းပါပဲ။ အဲဒီတော့ ဆရာတော်က
အနားမှာရှိတဲ့ တပည့်ရဟန်း တစ်ပါးကိုခေါ်ပြီး "မောင်ပဉ္စင်း...ဒီပေစာကို
အမိန့်ရှိပါတယ်။ တပည့်ကလည်း ဆရာတော်အမိန့်ရှိတဲ့အတိုင်း ထုံးအိုးထဲမှာ
နောက်တစ်နေ့ညနေ စာမူရှင်ရဟန်း စာမူလာယူတော့ ဆရာတော်က "ကိုယ်တော်ရဲ့ပေစာ
ဟို ထုံးအိုးကြီးထဲမှာ နှစ်ထားတယ် ယူသွား"လို့ မိန့်လိုက်ပါတယ်။
စာမူရှင်ရဟန်းလည်း ကိုယ့်ပေစာကို ယူပြီး မိမိကျောင်း ပြန်သွားပါတယ်။
ကျောင်းရောက်တော့ သီတင်းသုံးဖော် သူငယ်ချင်းတွေကို
ဆရာတော့်အပြုအမူကို သဘောကျလွန်းလို့ ဆရာတော်ရှိရာ
ကျောင်းတိုက်ကိုမှန်းပြီး ဦးချကြပါသတဲ့။ ကုန်းဘောင်ခေတ်ရဲ့
စာပေဝေဖန်ရေးဆိုရင်လဲ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ စဉ်းစားကြည့်မိပါတယ်။ တကယ်လို့သာ
ဆရာတော်က အမှားတွေဗလဗျစ်နဲ့ ကျမ်းစာကိုဝေဖန်ရမှာ အားနာလို့၊ ဒါမှမဟုတ်
အကြောင်းတစ်ခုခုကိုငှဲ့လို့ "ကောင်းပါတယ်လို့" ပြောပြီး ပြန်ပေးလိုက်ရင်
ခေတ်အဆက်ဆက် ဒီနေ့စာသင်သားတွေအထိပေါ့၊ မတွေးဝံ့စရာပါပဲ။ ဝေဖန်စရာရှိရင်
ဝေဖန်ပြီး ချီးကျူးစရာရှိရင်လဲ ချီးကျူးတာဟာ ပညာရှိတွေရဲ့ သဘောတံထွာ
တကယ်တော့ ဆရာတော်ဦးဗုဓ်ဟာ သက်တော် ၅၅-နှစ်ပဲ နေထိုင်သွားရပါတယ်။
၅၅-နှစ်ပဲ နေသွားရပေမဲ့ ပြုစုရေးသားသွားတဲ့ ကျမ်းစာတွေကတော့
၆၀-ကျော်ပါတယ်။ သက်တော် ၈၀-လောက်များနေခဲ့ရရင် ကျမ်းပေါင်း
၂၀၀-ကျော်လောက်များ ပြုစုသွားမလားလို့ တွေးမိပါသေးတယ်။
ဆရာတော်ပြုစုတဲ့ကျမ်းပေါင်း ၆၀-ကျော်ထဲမှာ နိဿယကျမ်းချည်း
၄၅-ကျမ်းတိတိရှိတယ်လို့ ဆရာ တော် မာဂဓီ(သာစည်)တို့က ဖော်ထုတ်ပြထားပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့ နိဿယကျမ်းချည်း အဓိကထား ပြီး ပြုရသလဲဆိုရင် နောင်ခေတ်
စာသင်သားတွေ မပင်မပန်း ချမ်းချမ်းသာသာ သင်ယူလေ့ကျက်နိုင် အောင်
ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ သတင်းစာနဲ့ ရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြားတွေမှာ
နေ့စဉ်နဲ့အမျှ တွေ့နေရတဲ့ လောကနီတိဟာ ဆရာတော်ဦးဗုဓ် နိဿယပြန်ဆိုခဲ့တာပါ။
နိဿယပြန်ဆိုရေးတဲ့နေရာမှာလဲ ကျမ်းစုံလှပါတယ်။ နိဿယတွေထဲမှာ
သံပျင်ဋီကာနိဿယ တောင် ပါလိုက်ပါသေးတယ်။ သံပျင်ဋီကာဆိုတာ ကျစွာမင်းရဲ့
သမက်ဖြစ်မဲ့ ရဟန်းငယ်တစ်ပါး ပြုစုခဲ့ တာပါ။ ဒီကျမ်းပြုစုလို့လဲ
ဘုရင့်သမီးတော်ရခဲ့တဲ့ ရာဇ၀င်ရှိပါတယ်။ သံပျင်ဋီကာနဲ့ ပတ်သက်လို့
ဆရာတော်ပြုစုခဲ့တဲ့ နိဿယကျမ်းတွေထဲက မြန်မာပြည်အရပ်ရပ်က
အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာ တွေ့နေရတဲ့ နိဿယကျမ်းတစ်စောင်ကိုပြပါဆိုရင်
ဓမ္မစကြာနိဿယကိုပဲ ပြရမှာပါ။ မြန်မာပြည် သာ သနာသမိုင်းမှာ ဓမ္မစကြာပါဠိကို
ပထမဆုံး နိဿယပြန်ဆိုတာ ဆရာတော်ဦးဗုဓ်ဖြစ်တယ်လို့ သမိုင်း ဆရာတို့က
ဆိုကြပါတယ်။ ဓမ္မစကြာပါဠိကို ခေတ်အဆက်ဆက် တခြားဆရာတော်တွေ နိဿယပြန်
ဆိုခဲ့ပေမဲ့ ဆရာတော်ဦးဗုဓ်နိဿယကို မကျော် နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။
အဲဒီမှာ ကြုံလို့ပြောရရင် ဓမ္မစကြာပါဠိတော်ရဲ့အစမှာ "ဘိက္ခူနံ ပဉ္စ၀ဂ္ဂီနံ
ဣသိပတန နာမကေ"အစချီတဲ့ အမွှမ်းဂါထာ သုံးပုဒ်ရှိ ပါတယ်။ အဲဒီဂါထာသုံးပုဒ်က
ဘုရားဟော မဟုတ်ပါဘူး။ ဆရာတော်ဦးဗုဓ် ဓမ္မစကြာပါဠိကို နိဿယ
ပြန်ဆိုရေးသားစဉ်က ဓမ္မစကြာကို ကြည်ညို လွန်းလို့ ဆိုပြီး
ဆရာတော်ကိုယ်တိုင် ပါဠိဂါထာသုံးပုဒ် သီကုံးပြီး ထည့်သွင်းခဲ့တာပါ။
ဒီနေ့အထိ အဲဒီဂါထာသုံးပုဒ်ကို ဓမ္မစကြာပါဠိရဲ့အစမှာ တွေ့နိုင် ပါတယ်။
ဆရာတော်ဦးဗုဓ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ပြောရမယ်ဆိုရင် ပြောစရာတွေ အများကြီးပါပဲ။
ပြောချင်တာတွေထဲ က တစ်ခုပြောစရာ ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါ ခုဒ္ဒသိက္ခာနိဿယကျမ်းရဲ့
ရာဇ၀င်ပါ။ ခုဒ္ဒသိက္ခာကျမ်းဆို တာ ရဟန်းတော်တွေအတွက် ၀ိနည်းကျင့်ဝတ်တွေကို
ပြထားတဲ့ကျမ်းပါ။ ဂါထာပေါင်း ၄၈-ဂါထာ ရှိပါတယ်။
အဲဒီခုဒ္ဒသိက္ခာကျမ်းကို နိဿယပြန်ဆိုနေချိန်မှာ ဆရာတော်ဦးဗုဓ်ရဲ့
ကျန်းမာရေးက လုံးဝ မကောင်းပါဘူး။ ဒူလာသွေးဝမ်းကျရောဂါ ဖြစ်နေပါ တယ်။
ရောဂါက လျော့မသွားဘဲ တိုးလို့တိုးလို့သာ ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒီတော့
ကုဋီတက်လိုက်၊ ကျောင်းပေါ်ပြန်တက်ပြီး စာရေးလိုက်နဲ့ စာရေးရတာ
အတော်ဒုက္ခရောက်နေပါတယ်။ စာရေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း ပြောစရာက
ရှိလာပြန်ပါတယ်။ ဆရာတော်ဦးဗုဓ်တို့ခေတ်တုန်းက ဒီခေတ်လို ဘောလ်ပင်တွေ
ဖောင်တိန်တွေနဲ့ ရေးရတာမဟုတ် ပါဘူး။ ပေရွက်ပေါ်မှာ ကညစ်တံနဲ့
ခဲရာခဲဆစ်ရေးရတာပါ။ ဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတာ တွေးသာ ကြည့်ပါတော့။
အတော်အနှောင့်အ ယှက်ဖြစ်နေတော့ နောက်ပိုင်း ကျောင်းပေါ် ပြန်မတက် တော့ဘဲ
ကုဋီထဲမှာပဲ နေလိုက်ပါတော့တယ်။ တပည့်ကြီးတွေကို ကုဋီနံရံမှာ
သင်ပုန်းလိုမီးသွေးနဲ့ သုတ်လိမ်းခိုင်းစေပါတယ်။ ၀မ်းသွားလိုက်၊
စာထရေးလိုက်နဲ့ နေ့မနားညမနား ရေးသားပါတယ်။ ဆရာတော်ရေးပြီးတဲ့
ကုဋီနံရံကစာတွေကို တပည့်ကြီးတွေကလာပြီး ပုရပိုက်နဲ့တစ်ဆင့်
ကူးယူပေးထားရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျမ်းတစ်စောင်ပြီးတဲ့ အထိပါပဲ။
ဆရာတော် ရောဂါဖြစ်နေတဲ့ကြားက အနားမယူဘဲ ဘာ့ကြောင့်ကျမ်းတစ်စောင်ပြီးအောင်
ရေးခဲ့သလဲ။ သာသနာတော်အတွက်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်တစ်ခုကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကျော် ကြားမှု၊ ဘာအောင်မြင်မှုကိုမှ မျှော်ကိုးပြီး ရေးသားခဲ့တာ
မဟုတ်ပါဘူး။ တကဲ့သဒ္ဓါစစ်စစ်နဲ့ ရေးသွား တာပါ။ ဆရာတော်က ဒီအကြောင်းအရာနဲ့
ပတ်သက်ပြီး ခုဒ္ဒသိက္ခာနိဿယနိဂုံးမှာ အောက်ပါအ တိုင်း ရေးသားပေးထားတာကို
၀ိဇာ မာနေပိ ရောဂမှိ၊ တံ နပေက္ခ ၀ယောကတော။္ဇ
တသ္မာဟိ မနုယုဉ္စန္တု၊ သောတာရတ္တာန ပေက္ခိနော။
"ကိုယ်စိတ်မသာ နာကျင်ခြင်းရှိလျက်လည်း ထိုရောဂါကို မငဲ့မူ၍သာလျှင်
ခုဒ္ဒသိက္ခာနိဿယ ကို ရေးသားပြုစုအပ်၏။ ထို့ကြောင့် သင်စာသင်သားတို့သည်
ကိုယ်နှင့်အသက် မငဲ့ကွက်ဘဲ ဤခုဒ္ဒ သိက္ခာကျမ်းကို ကိစ္စတစ်ပါး စွန့်ပစ်ထား၍
ဖန်များကြိမ်ခါ လွန်စွာကြိုးကုတ် အားထုတ်မြဲပင် ယှဉ်စေ ကုန်သတည်း"။
ဒီနိဂုံးပါဠိအမှာလေးကို ပြန်ပြန်ကြည့်မိတိုင်း ဆရာတော့်အပေါ်
ကြည်ညိုလို့မဆုံးဖြစ်မိပါတယ်။ ဆရာတော်ဦးဗုဓ်ဟာ စကားအလွန်နည်းတော့
တသီးတသန့် သြ၀ါဒပေးတာတွေ ဘာတွေ သိပ်မ တွေ့ရပါဘူး။ သြ၀ါဒပေးတာလည်း
သိပ်ပြီးအားသန်ပုံ မပေါ်ပါဘူး။ အသက်ထက်ဆုံး လက်ကိုင်ထား ပြီး
ကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်သုံး တပည့်တွေကိုလည်း ကျင့်သုံးစေခဲ့တဲ့
ရွှေစကားလေးတစ်ခု ရှိပါတယ်။ အဲဒီရွှေစကားလေးကတော့..............
"ဘယ်သူ ကဲ့ရဲ့ ကဲ့ရဲ့၊ ဘုရားမကဲ့ရဲ့အောင်နေ" ပါတဲ့။
ကျမ်းကိုး။ ၁။ ညောင်ကန်သာသနာဝင် (ဦးသုဒဿန)
၂။ ဆရာတော်ဦးဗုဓ် နှစ် ၂၀၀-ပြည့်စာစောင်
၃။ မယ်နုအုတ်ကျောင်းဆရာတော် (အရှင်ပညာသာမိ) (မြတ်သတိ၊ မတ်လ၊ ၂၀၀၁)
မှပြန်လည်ကူးယူ ပူဇော် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
" ကျနော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံး ဘုရားရှင် ကဲ့ရဲ့တာ မခံရအောင် ဘုရားစကား
နားထောင်လိုက်နာ ကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေ။ "
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 3:25 AM No comments:
Window 8 အသုံးပြုသူတွေအတွက် Theme အလန်းလေးတွေပါ။ စိတ်ဝင်စားရင် အောက်မှာTheme7မျိုး တင်ပေးထားပါတယ်။ Theme တစ်မျိုးချင်းစီအလိုက် နမူနာပုံလေးတွေလည်း ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ပါဝင်တဲက Theme တွေကတော့
Black Windows 8 Metro Theme ၊ Black Windows 8 Metro Theme ၊ Purple Windows 8 Metro Theme
Windows 8 Dark Metro Theme ၊ Gold Windows 8 Metro Theme ၊ Blue Metro Theme
Darker Blue Windows 8 Metro Theme တို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
Black Windows 8 Metro Theme
Purple Windows 8 Metro Theme
Windows 8 Dark Metro Theme
Gold Windows 8 Metro Theme
Blue Metro Theme
Darker Blue Windows 8 Metro Theme
3. Purple Windows 8 Metro Theme
4. Windows 8 Dark Metro Theme
5. Gold Windows 8 Metro Theme
6. Blue Metro Theme
7. Darker Blue Windows 8 Metro Theme
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 3:05 AM No comments:
Window7& 8 အတွက် Theme အလန်းလေးတွေ (Japan & Korea)
နောက်ထပ် Theme တစ်ခု ကို ထပ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အောက်မှာလည်း နမူနာပုံလေးတွေနဲ့ အစမ်းကြည့်လို့ရအောင်ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ Link သုံးခုလုံးကိုဒေါင်းရမှာနော် Link တစ်ခုစီမှာ Theme တစ်မျိုးစီပါဝင်ပါတယ်ဗျာ။ Theme Pack File ကို Double Click နှိပ်ပြီး Apply နှိပ်လိုက်ရုံဘဲ။ စိတ်ဝင်စား တယ် ဆိုရင် အောက်က Link မှာ ဒေါင်းယူနိုင် ပါတယ်။ အားလုံးဘဲ အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
Macro World of Rocks Theme
Maple Story Theme-3
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 1:28 AM No comments:
ကျွန်တော် Post တွေမတင်နိုင်သေးလို့ တောင်းပန်ပါတယ်ဗ...
မေးလ်ဝင်လာတာနဲ့ AutoReply Massage လေးပြန်ပို့ချင်တ...
Nokia Phone ရှိတဲ့သူတွေအတွက် နောက်ထပ် Theme ပေါင်း...
ရုပ်ပွားဆင်းတုတော်က ခိုက်တာလား… ဗေဒင်ဆရာက ရိုက်တာလ...
Window7& 8 အတွက် Theme အလန်းလေးတွေ (Japan & Kore...
ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်တိုင်းသိသင့်တယ့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ သိမှတ်...
Corel VideoStudio Pro X3 v13.6.0.272 + Keygen
Portable Driver Genius Pro 10.0.0.820
Video တည်းဖြတ်ဖို့ Sony Vegas Pro 11 + Patch
Anti-Trojan Elite 5.5.5 Multilingual
ဆရာတော်အရှင်ကောမလ ဧ။် ကံသုံးပါးနှင့် ပတ်သတ်၍ ဆောင်...
Window ရဲ့ Service အကြောင်းတွေကိုလေ့လာခြင်း
Computer Shortcut Key ကောင်းကောင်းလေးများ
Window 8 32bit & 64bit With Product Key
English မှ Myanmar သို့ စကားစုအတိုင်းပြောင်းပေးမယ်...
Allok Video To DVD Burner v2.6.0531 (Full Version)...
Windows7Home Premium x86 & x64 SP1 ISO
Windows7Professional x86 & x64 SP1
Window7- SP1 Ultimate x86 & x64
ရှိသမျှ Gmail Account အားလုံးကို Browser တစ်ခုတည်း...
The Suffering Game (Full Version)
Aston နဲ့ Stare Menu အလန်းလေးတွေ သုံးရအောင်
SWiSH Max4 Full Version
AVCWare Video Converter Ultimate 6.8.0.1101
Laptop အကြောင်းစုံလင်စွာ သိရှိရန်
Wi Fi အကြောင်း သိကောင်းစရာ
Axialis IconWorkshop v6.61
3herosoft iPad to Computer Transfer 3.9.8.1124
3herosoft iPhone to Computer Transfer v3.9.8.1124
Ashampoo Core Tuner 1.1 နဲ့ ကွန်ပြူတာ ရဲ့ Speed ကိ...
Beauty Wizard 3.3 ( မိမိပုံလေးကို မိတ်ကပ်နဲ့ ဆံပင်...
AntiVirus Uninstaller Tools (38 မျိုး)
Aiseesoft Total Video Converter v4.0.08
Nero 11 (Full Version)
IT နည်းပညာ မှတ်စုများ (အတိုအထွားလေးများပါ)
ံFruityloops studio 10
Wild Felines Animation Screen Saver
G-Mail အကောင့်ကို စိတ်ချလက်ချသုံးကြရအောင်
Babylon Pro 9.0.3 r14 ( FULL VERSION )
Portable Magic Burning ToolBox 4.4.3
HJ Split နဲ့ဖိုင်များကိုခွဲခြင်း ၊ ဖိုင်များကိုဖြည...
သိထားသင့်တဲ့ ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ အခြေခံအချက်အလက်များ
ထူးထူးဆန်းဆန်း 9.28 ဘဲ ရှိတဲ့ Window7Final Vers...
ကျွန်တော် အရိမေတ္တေယျဘုရား သမိုင်းကို ကျွန်တော့်ဆိုဒ်လေးမှာမျှဝေခွင့်ရတဲ့အတွက် အရမ်းကိုကြည်နူးမိပါတယ်ဗျာ။ အခုဘုရားသမိုင...